Ryzen 5 2500U mgbawa na-enye arụmọrụ dị elu karịa Intel processors | Akụkọ akụrụngwa
Ryzen 5 2500U mgbawa na-enye arụmọrụ dị elu karịa Intel processors
Ọchịchị Intel processors na-arịwanye egwu. Onye ukwu, AMD na-agbasi Intel ike ọbụna na mpaghara ebe ọ dị mma ma na-agbanwe agbanwe. Ruo ugbu a, akara ọhụrụ AMD nke ndị Ryzen processors anọghị na ngalaba dị mkpa, laptọọpụ. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịmaliteworị ịgbanwe.
AMD na-akwadebe ihe ọhụụ ọhụụ Ryzen nke gbadoro anya na ike oriri. Onye mbụ n’ime ha bụ ya Ryzen 5 2500U nke, dị ka akara ngosi oge mbụ si kwuo, nwere ike ịbụ karịa Intel na-arụ ọrụ ntanetị nke ọgbọ asaa.
AMD, na-ekpo ọkụ n'ikiri ụkwụ Intel
Ihe kpatara AMD ji nakwere nomenclature nke ndị nhazi ya gosipụtara abụghị ihe mberede, ọ bụghịkwa ihe nzuzo. AMD nwere ọkwa atọ nke Ryzen processors agụtala 3, 5 na 7 iji kwekọọ ọkwa Intel nke i3, i5, na i7 n'otu n'otu, mana enwere ike ịkpọ ya ihe ọ bụla ọzọ. Otú ọ dị, nke a na-eme ka nyocha na ntụnyere dị mfe nghọta.
Ọzọkwa, AMD anakwerekwala "U" na-ezo aka na nhazi ndị ezubere maka kọmputa akwụkwọ ndetu. Ryzen 5 2500U yiri ka ọ gafere ọkwa na arụmọrụ, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga nke Intel.
Dabere na nsonaazụ ya nke ule emere na nhazi Rzyen 5 2500U, nke gha enwe isi ano ma jiri AMD ohuru ihe osise eserese nke Radeon Vega, nke na-arutu aka 2,0 GHz ọsọ ọsọ si na igbe ahụ pụta, akara ọzọ laptọọpụ AMD ọzọ dị na ma ọ bụ ọbụna na-akụ Intel Core i5-7200U ma ọ bụ Core i7-7500U.
Nsonaazụ ndị a chọrọ ụfọdụ nuances. Nke mbu, eziokwu nke data akabeghị otu narị percent, nke mere na anyị ga-akpachara anya. Nke abuo, n’ime ule ndia Ryzen 5 U anaghị atụle Intel's latest XNUMXth gen line of processors. Mana n'agbanyeghị nke a, n'ọnọdụ kachasị njọ, AMD ga-enwe ọdịnihu dị mma nke ga-ewere nzọụkwụ siri ike na-atụ egwu egwu Intel.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Ryzen 5 2500U mgbawa na-enye arụmọrụ dị elu karịa Intel processors
Nkwado nke HTC si mobile nkewa site na Google kwadoro